Fitetezana Blaogy Libiana: 26 Oktobra- Ny Andro Mainty sy ny Filankevitry ny Filaminana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Oktobra 2018 7:08 GMT
Mampahatsiahy antsika i Gheriani fa nilaza i Grazziani, ilay Jeneraly Italiana nalaza be tamin'izany fotoana izany fa safidy telo ihany no azony nomena ireo Libiana tamin'ny tsy faneken'izy ireo ny fahambonian'i Roma, ary ireto avy izany; ny tsatokazo fanantonana, ny toby fampivangongoana na ny sambo mankany amin'ireo nosy. An'arivony maro no nafindra toerana ary ny ankamaroan'izy ireo maty lavitry ny fireneny tany amin'ny tany tsy fantatra, ireo ambiny tafaverina kosa nitondra holatry ny fijaliana mandra-pahafatiny.[sic]”
Manamarika hafatra iray azony avy amin'ny Masoivoho Amerikana any Libia i Happymoi, izay milaza fa ” Ho fahatsiarovana ny Andro Fisaonana Ho an'ny Libiana, nanoama didim-pitondràna ny Governemantan'i Libia fa amin'ny Zoma 26 Oktobra, ho tapahana ny aterineto sy ny antso an-taribia iraisam-pirenena manerana ny firenena, amin'ny 6 maraina ka hatramin'ny 6 hariva. Hofoanana avokoa ireo sidina rehetra an'ny Orinasam-Piaramanidina Libiana, na dia afaka omena alalana aza ny fisidinana an'habakabaka sahanin'ireo orinasa iraisampirenena misahana fitaterana an'habakabaka. Foana avokoa ireo fitsidihana iraisampirenena an-tanety sy an-dranomasina manerana ny firenena rehetra sahanin'ny orinasa ambany fitantanan'ny Governemantan'i Libia.”
Namoaka ny fanambarana LTT mikasika izany i Tarek Siala: ”Ry Mpanjifa hajaina, Satria androm-pisaonana ho an'ny Libiana rehetra ny 26 Oktrobra toy ny isan-taona […] milaza aminareo izahay fa ho tapahana ny tolotra Aterineto amin'ny Zoma 26 Oktobra, manomboka amin'ny 6 maraina ka hatramin'ny 6 hariva.”
Manazava i Khadijateri etsy an-daniny fa ”raha andro fianarana izany, angatahina mba hiakanjo mainty ireo ankizy. Matetika averina ho mainty sy fotsy ny fahitalavitra Libiana.”
Havelako ho an'i Benghazi Citizen ny fanamarihana farany, izay iray tamin'ireo nahamarika fa tsy ela akory izay, nahazo seza tao amin'ny Filankevi-Pilaminana ao amin'ny Firenena Mikambana i Libia. Milaza izy hoe ”miova ny fotoana, ary lasa (naman'ny Filankevitra) ankehitriny ny fahavalo tamin'ny omaly.”